Gbanyụọ Grid Solar Inverter
Akụrụngwa Ike Solar
Gbanyụọ Grid Solar Power System
Njikwa Nchaji Anyanwụ
Ìhè Ike Ìhè
Onye na-agbanwe ike anyanwụ
Ngwa ike Solar
Anyanwụ ike ọkụ
1. So ahohiahia kɛse no befi ase? N'ikwu okwu n'ozuzu, a ga-atụ anya batrị ndị dị na ọkụ ndị dị n'èzí na-adịru ihe dị ka afọ 3-4 tupu ọ ga-adị mkpa ka edochie ha. Ndị ọkụ ahụ nwere ike ịga afọ iri ma ọ bụ karịa. Ga-amara na oge eruola ịgbanwe akụkụ mgbe ọkụ enweghị ike ...
Kedu ihe onye na-elekọta ụgwọ ọrụ anyanwụ na-eme
Chee onye na-ahụ maka ụgwọ ọrụ anyanwụ dị ka ihe nchịkwa. Ọ na - anapụta ike site na PV de n’usoro ibu na batrị batrị. Mgbe batrị batrị fọrọ nke nta ka ọ jupụta, onye na-achịkwa ya ga-ewepụ ihe nkwụnye ụgwọ ugbu a iji jigide voltage achọrọ iji kwụọ batrị ahụ n'ụzọ zuru ezu ma debe ya ...
Gbanyụọ-okporo Igwe Igwe Igwe Igwe: gịnị ka ịchọrọ?
Maka ụdị igwe dị na mbara igwe ị ga-achọ oghere ndị dị na mbara igwe, onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ, batrị na onye ntụgharị. Isiokwu a kọwara usoro mbara igwe n'uju. Akụkụ dị mkpa maka sistemu jikọtara na okporo igwe Igwe ọ bụla chọrọ sistemụ yiri ya iji bido. A okporo-kegide anyanwụ usoro cons ...